Miroso tsikelikely amin′ny nimerika ny fampianarana
Nahazo tablette miisa 50 ny CEG Ratsimilaho
Mba ahafahana miroso kokoa eo amin′ny sehatra �Numerisation de l′education� eto Madagasikara , nanao fanomezana fitaovana mifanaraka amin′zany ny Orange Madagascar,
ho an′ny sekolim-panjakana 30 manerana ny nosy.
Nahazo ny anjarany tamin′izany ny CEG Ratsimilaho, ny asabotsy faha 18 oktobra 2014 lasa teo, ka nahazo tablette miisa 50 sy ny kojakoja ilaina amin′izany toy ny Serveur miisa 2, Video projecteur sy ny vata fikajiana.
Tonga nanolotra ny fitaovana i Rtoa Josie RANDRIAMBELONA, filohan′ny Orange solidarite Madagascar ary noamafisany tamin′ny fandraisany fitenenana fa tompon′andraikitra ny Orange Madagascar amin′ny fanabeaza eto Madagascar. Fisaorana kosa no natolotry ny fianakaviam-be mpampianarana sy ny tompon′andraikitry ny sekoly ho an′ny Orange solidarite Madagascar.
Nisy ihany koa ny fampiofanana mahakasika ny fampiasana ireo fitaovana ireo, ka samy nahazo ny tandrify azy avokoa ny mpianatra, ny mpanabe sy ny tompon′andraikitry ny sekoly.
Tsy vao sambany akory amin′ny Orange Madagascar ny fanaovana fanomezana sy asa soa toy itony, fa efa nisy izany hatramin′ny taona 2006, ary saika niompana bebe kokoa eo amin′ny sehatry ny fanabeazana izany. Isany misehatra asa sosialy ataon′izy ireo ihany koa ny fahasalamana sy ny kolontsaina ary ny toe-karena toy ny village orange ireny. Nanomboka ny taona 2014 no niompana kokoa tamin′ny nimerika, ary ny filamatra amin′izany moa dia �numerisation de l′education�, mba ahafahana mampiditra ny nimerika an-tsekoly no tanjona kendrena, araka nambaran′ny filohan′ny Orange solidarite Madagascar, ka sekoli-mpanjaka EPP sy CEG no iantefan′izany tetik′asa izany.
(83) Prud'Homme RAKOTOSON : 21-10-2014 - 10:10